Munamato kuna Chishamiso Musande Razaro. ? Vanorwara, Imbwa uye Hutano
Munamato kuna Mutsvene Razaro inozivikanwa kubva panguva dzekare semubatsiri mukuru wevarombo, anorwara uye mhuka. The munamato kuna Mutsvene Razaro Chombo chine simba chakapihwa kwatiri uye kubudikidza nekutenda chinotiitira zvishamiso zvine simba zvichienderana nezvatinoda.
Nekufamba kwenguva akave mutsigiri uye mushamarari wenharaunda yeungochani uye yevaCuba avo gore rega rega, musi waDecember 17, vanosangana muEl Rincón kupemberera mufaro wekuzvarwa kwemutsvene unoshamisa kudaro.
1 Munamato kuna Mutsvene Razaro Ndiani Musande Razaro?
1.1 Munamato kune unoshamisa Musande Razaro
1.2 Munamato weSanta Razaro wevanorwara
1.3 Kune imbwa
Munamato kuna Mutsvene Razaro Ndiani Musande Razaro?
Mune izwi raMwari tinowana maRazariani maviri; mumwe anonzi muzita remupfumi uye lazarus panotsanangurwa Jesu nedenga negehena.
Razaro wechipiri ndiye hama yaMarta naMaría uye chero protagonist yechimwe chezvishamiso zvikuru zvaJesu Panyika, kumuka.
Mukutenda kwechiKaturike vanhu vaviri ava vakabatana kuva chinhu chimwe nekuti zvinonetsa kuvaparadzanisa sezvo mumwe nemumwe aine zvakafanana zvakafanana kune mumwe.
Iye anozivikanwa semubatsiri mukuru wemhuka dziri munzvimbo yekusiiwa, kutaura zvazviri anofungidzirwa kuve anodzivirira wembwa, asi ichi chiri chigadzirwa chekutenda kwemunhu sezvo musande anobatsira munhu wese anozvida.
Iye anotaurira nyaya iyi kuti akararama kusvika aine makore makumi matanhatu uye kuti muviri wake wakavigwa mu sarcophagus yakagadzirwa nemarble iyo muna 1972 yakawanikwa iine zvisaririra mukati mayo.
Munamato kune unoshamisa Musande Razaro
Razaro Musande, shamwari yaJesu Kristu uye hama uye mudziviriri weavo vanotambura!
Iwe waiziva kurwadziwa kwehurwere uye nekushanya kwaJesu Kristu zvakadzoreredza hupenyu hwako muBethania, uchigamuchira zvakanaka kuteterera kwedu, apo tinokumbira rubatsiro rwako muawa ino yekutambudzika.
Namata kuna Baba Vokusingaperi kuti isu tiite serene uye nekuchengetedzeka kuvimba nesimba raJesu.
Mutsvene Razaro Anoshamisa, amutswa nesimba reVamwari raJesu Kristu, tinokukumbira iwe nenguva inosiririsa yekurwadziwa kwako uye nemufaro usingaperi wawakasangana nawo apo Jesu nemazwi iwayo anotapira akakutumira kubva muguva, kuti uteterere kuna Mwari Mudzidzisi kuitira kuti kubudikidza newe Mediation atipe izvo zvatinovimba iwe ndokumbira.
Chechi yeKatorike yakazivisa pachena simba raSande Razaro uye anomuita seumwe wevatsvene vanonamatwa mukutenda, saka shandisa mukana uyu kumunamato.
Nenzira iyi tinogona kuratidza izvozvo minamato iwo anomuka pamberi pechigaro chake cheushe haarasikirwe minamato kana kuteterera pasina asi panzvimbo pezvo anhuhwirira kunhuhwirira pamberi pehuvepo hwake uyezve mhinduro yake inouya kwatiri.
Kuita munamato nguva yakakodzera haina kugadzirirwa, zvisinei zvakakosha kusimbisa kuti chinhu chinoshamisa zvechokwadi kuita munamato kubva pamoyo uye uine chokwadi chekuti mhinduro inouya kwatiri.
Kana zvisingaitwe nenzira iyi saka ivo havana chinhu uye havana chinangwa kudzokorora.
Munamato weSanta Razaro wevanorwara
Vakakudzwa Musande Razaro, Gweta rangu, mutenderi wangu mutsvene, Ndinoisa tariro yangu mamuri, Ndinoisa zvido zvangu, zvinondinetsa uye kusagadzikana kwangu, zviroto zvangu nezvishuvo, uye, ndichiziva zvishamiso zvakawanda zvakashanda kubudikidza newe, uchiziva runako runobva pamaoko ako kana wabvunzwa nekuzvininipisa uye nekutenda, nhasi ndauya kwauri ndichinyengerera, ndichikumbira rubatsiro rwako rune simba nengoni.
Iwe wakaropafadzwa Musande Razaro, nekuda kwetariro yepamusoro ino yakasimbisa moyo wako kuti usvike korona yekufirwa, uye nekuda kweishuvo irwo yekupa hupenyu hwako kune Iye waakakupa zvakare mushure mekurasikirwa nayo, ndipe Mutsvene ane mbiri Razaro wako akakosha kureverera, nyengeterera zvido zvangu pamberi paJesu akanaka, shamwari yako, hama uye mubatsiri, uye kumbira kuti netsitsi dzake dzisingaperi ndipe zvandiri kukumbira nemoyo wangu wese uye kuti awane zororo mukupererwa nezano rangu:
(taura kana zvaunoda kuzadzisa)
uye kana iwe uchifunga kuti hazvisi nyore, ndipe rugare nerunyararo rwemweya wangu zvekuti ndinotarisira kuti kuzadzikiswa kwehumwari ndokusiya basa.
Mutsvene Razaro, baba vane mbiri yevarombo, ndinokukumbira, usamira kundibatsira, ratidza pachako kuita sezvaunogara uchiita uye tora zvikumbiro zvangu kuna She nekukurumidza sezvinobvira, ndipe maropafadzo ako nedziviriro, pedza kusuwa kwangu nematambudziko ubvise kubva pakurarama kwangu zvese zvakaipa nevavengi. .
Kuburikidza naJesu Kristu, hama yedu uye Ishe.
Minamato yavanobata nayo nyaya dzehutano dzinogara dzichikurumidza uye ichi chinyorwa icho nguva zhinji chishamiso chamwari chete chinogona kutibatsira.
Mutsvene Razaro, uyo anoziva kuti chii kunetswa nerufu rwekufa uye akatofa akararama munyama yake kuti rumuko chii, ndiye musande anoratidzwa kutibatsira isu mune aya mamiriro ezvinhu.
Anoziva izvo zvinogona kutambudzika nekutambura zvakaipa panyama izvo zvinokwanisa kupedzisa hupenyu hwedu, ndosaka achive gweta rakakwana pamberi pechigaro chekudenga sezvo achiziva kuti chishamiso cherumuko chinogoneka.
Isu tichafamba takananga kumunamato kweSanda Razaro kune imbwa uye mhuka.
Anodiwa Musande Razaro;
Hupenyu hwako hwakapihwa kubasa raIshe hwakatora iwe
Kukoshesa zvinhu zvidiki muhupenyu; Unhu hutsvene hwaMwari uye neboka remhuka dzakatendeka dzevanhu.
Iwe kupfuura chero chero ani iwe unoziva kukosha kwezvemhuka
Izvi zvinoperekedza isu kana isu tichinzwa tiri tega, uye kwete Mumoyo wake isu tinogona chete kuwana rudo uye rudo.
Chipfuyo changu parizvino chakakuvara zvisingaite
Uye nehutano husina kusimba uye ndosaka ini ndichibvunza iwe nekutenda kwangu kose
Dai uchirapa nesimba rako rinoshamisa.
Teerera kune izvi ini ndinokumbira uye usandisiye ndoga pamberi peichi chikumbiro.
Namata munamato weSanta Razaro wembwa nekutenda kukuru.
Trasti yematare akaoma, varombo y kusiiwa izvo zvinosanganisirawo mhuka, kunyanya imbwa. Uyu ndiwo munamato uyo vashoma vanomira kutaura uye ndizvo zvakafanira nekuti imbwa zvisikwa zvipenyu zvinodawo rubatsiro rwedu neminamato yedu.
Ivo zvakare vanotambura nechirwere, kusiiwa, nzara, kusuwa uye kurwadziwa. Ivo vanhu vapenyu vane vane zvemukati uye zvemuviri zvinodiwa izvo nguva zhinji hapana ane hanya kupa uye izvo zvinoita kuti vatambure.
Akatendeka shamwari yaKristu uye chapupu munyama
Kwauri, nhasi, ndinopfugama netsitsi kukumbira pamwe nekutenda kwangu kose
Ndipeiwo hutano, chipo icho chisingaenzaniswi,
Zvekuti ndinodzoreredza state state yandagara ndichinakidzwa nayo.
Iwe unoziva izvo kurwadziwa, kurwara, kushungurudzika nekutambura chii.
Iwe unoziva kuti chii kutakura nehupfu chirwere
Uye zora madziro uye zviso zveimwe zororo.
Mashoko angu, anodiwa musande, ndinosimudzira kudenga
Mukutsvaga ngoni, kubatsira uye mufaro.
Tora ivo mujasi rako uye undiite wakakodzera izvo ini ini kukumbira.
Wakafarira munamato San Lazaro for health?
Hutano inotora zvinhu zvakawanda muhupenyu hwezvinhu zvipenyu, kubva panyama kusvika pane zvemweya zvinodiwa uye zvese izvi zvakaenzana.
Ndokusaka munamato uyu uchiva mumwe weakanyanya kukosha.
Zvinokurudzirwa kuzviita zuva nezuva uye zviri nemhuri saka zviri nani zvakanyanya nekuti nekuwedzera kuve chiitiko chekunamata icho chinosimbisa mhuri, zvinotibatsira kuti tinzwe takachengetedzwa mukati merwendo rwezuva nezuva San Lázaro, hukama hwehwo hwese matambudziko, hurembedzerwa ivo kuti Ivo vanogona kuwana rugare uye zorora mukati meyakaoma uye kuyedzwa.
Mhinduro ndeyekuti hongu, chakavanzika kutenda uko kunamisirwa minamato pamberi peatari yako.
Zvese zvatinokumbira baba kuti vatende, isu tichagashira, ichi chipikirwa chatinowana muBhaibheri dzvene uye icho chinoitwa chaicho kana tikatenda chiri.
Ndokusaka minamato chiitiko chekutenda zvakajeka uye zvisingakwanise kuitwa netsika.
Munamato wakaitwa nekutenda unokwanisa kuita zvese, kunyangwe zvirwere zvinotyisa zvingave zviripo.
Tora mukana wemasimba emunamato weSanta Razaro.